လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: June 2013
NERO 6, 7, 8 ,9 ,10 ,11 and 12 SERIALKEY, Patch and keygen တွေလိုအပ်ရင်.....
Friday, June 28, 2013 Multimedia
NERO6SERIALKEY and KEYGEN
NERO7SERIALKEY and KEYGEN
NERO 8 SERIALKEY and KEYGEN
NERO9SERIALKEY and KEYGEN
NERO 10 SERIALKEY, Patch and keygen
NERO 11 SERIALKEY, Patch and keygen
NERO 12 SERIALKEY, Patch and keygen
Jailbreak မပျက်ပဲ iOS ကို Restore လုပ်ကြရအောင် (iOS 4.x.x > iOS 6.x.x)
Thursday, June 27, 2013 iOS Devices ဆိုင်ရာ
Jailbreak လုပ်ထားသော iPhone, iPad, iPod အစရှိသည့် iDevices များမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘက်ထရီ အစားမြန်နေခြင်း၊ Safe mode တွင် တစ်ဝဲလည်လည်ဖြစ်နေခြင်းနှင့် ဘာမှ လုပ်မရပဲ ပန်းသီး Logo မှာ ရပ်နေခြင်း အစရှိသော ပြဿနာများ အခန့် မသင့်ပါက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတတ်ပါတယ်။
ဒီအခါမျိုးမှာ iDevice ကို Restore ပြန်လုပ်လိုက်ရင် Firmware update ဖြစ်သွားပြီး Jailbreak လည်းပြုတ်သွားပါတယ်။
မိမိ Update Restore လုပ်မိသော Firmware သည် လက်ရှိမှာ Jailbreak ရရှိနေပါက Jailbreak ပြန်လုပ်ရန် လွယ်ကူသော်လည်း၊ Jailbreak မရရှိသေးတဲ့ Firmware ဖြစ်ပါက ဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ပါ။
အထူးသဖြင့် software ဖြင့် Unlocked လုပ်ထားသော Locked ဖုန်းများမှာ အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်ပါပြီ...
အဲဒီ ပြဿနာများကို Computer အကူညီမလိုပဲ တစ်ချက်ထဲနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်...
အထက်ပါပြဿနာများ ဖြစ်လာပါက မိမိလက်ရှိ အသုံးပြုနေသော Firmware version ကို Jailbreak မပြုတ်စေပဲ Restore လုပ်နိုင်တဲ့ Tweak လေးတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ...
iLEX R.A.T လို့အမည်ရပြီး Jailbreak သမားတိုင်း မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Tweak လေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
iLEX R.A.T က ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ ပြဿနာတွေက..
Safe Mode မှာ ပါတ်နေခြင်း
Apple Logo မှာ တစ်နေခြင်း နှင့် အခြား ပြဿနာများလည်း ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်
iLEX R.A.T ကို iOS 4.x.x ကနေ iOS 6.x.x အထိ အသုံးပြုနေကြသော iPhone, iPad, iPad တို့ အားလုံးမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်..
iLEX R.A.T ၏ လက်ရှိနောက်ဆုံး Version အသစ်ဟာ (1.10-125) ဖြစ်ပြီး အရင် Version အဟောင်းနှင့် ကွာခြားချက်ကတော့ "Mobile Terminal" ရှိထားရန် မလိုတော့ပဲ တိုက်ရိုက် Restore လုပ်နိုင်သွားပါပြီ..
iLEX R.A.T ကို Run လိုက်တာနဲ့"iLEX R.A.T" နှင့် "iLEX RESTORE" option နှစ်ခုကို တွေ့ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်း Option နှစ်ခုက တစ်ခုနှင့် တစ်ခု လုပ်ဆောင်ချက် အနည်းငယ် ကွားခြားပါတယ်။
မိမိ iDevice ထဲမှာ Install လုပ်ထားသော Cydia Tweaks တွေ အားလုံးကိုသာ ဖျက်ပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Settings နှင့် တစ်ကွ အခြားအရာများအားလုံး အရင်အတိုင်းပဲ မပျက်ပါ။
Jailbreak မပျက်ပါ (Cydia) icon ကို Home screen တွင် တွေ့ ရပါလိမ့်မည်။
မိမိ iDevice ထဲက အရာများများအားလုံးကို ဖျက်ပစ်ပြီး Stock firmware ဖြစ်အောင် Restore ပြန်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Reboot ပြန်တက်လာသည့် အခါ "Activation" ပါ အစ/ဆုံး ပြန်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။
iLEX R.A.T ၏ Source " http://cydia.myrepospace.com/iLEXiNFO/ " ကို Cydia -> Edit -> Add နှင့် ထည်းသွင်းပြီး "iLEX R.A.T." ကိုသာ Install လုပ်ပါ။
"iLEX R.A.T" အသုံးပြုနည်း
နှစ်မျိုးရှိပါတယ် ပထမနည်းကတော့ မိမိ iDevice ၏ Home screen ရှိ "iLEX R.A.T" App ကိုနှိပ်ပြီး စိတ်ကြိုက် Option တစ်ခု ရွေးချယ်ပါက အလိုလျှောက် လုပ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။
ဒုတိယနည်းကတော့ PC ရှိ iFunBox ကို အသုံးပြုနည်းဖြစ်ပါတယ်..
၁) iDevice ကို PC နှင့် ချိပ်ဆက်လိုက်ပြီး "iFunBox" ကို Run ပါ။
၂) မိမိ Device ကို detect သိပါက ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း (Quick Toolbox) tab ကို ရွေးလိုက်ပါ။
၃) ထို့ နောက် "SSH Terminal" ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်း Box တစ်ခုတက်လာပါက အနီနှင့် ပြထားသော နေရာတွင် " rat " ဟုရိုက်ပါ။
၄) နောက်ဆုံးမှာ (Option 1) " 1 " ဟုရိုက်ပါ (Apple Logo မှာ တစ်နေသူများအတွက်)
အခြား Option များကိုတော့ လိုအပ်သလို ရွေးချယ်ပါ။ Fully Restore လုပ်လိုလျှင် (Option 12) " 12 " ဟုရိုက်ပါ။
၅) ပြီးလျှင် "Enter" နှိပ်ပါ။
၆) " Y " ဟုရိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို အလိုလို လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ပြဿနာအားလုံး ပြေလည်းသွားပါလိမ့်မည်။
** မှတ်ချက်။ ။ Restore လုပ်ပါက မိမိ Device တွင်းရှိ Data များအားလုံး ပျက်သွားမည်ကို သတိရှိပါ။ **
Credit to : iLEX R.A.T.
ပညာရေး အတွေးအခေါ်: Chanakya စဏကျ၏ ထူးကဲကောင်းမွန်သည့် အတွေးအခေါ် (၁၅) ခု
Wednesday, June 26, 2013 ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ
Monday, 13 May 2013 03:11 Written by နှိုင်းရင့်နွေ
(မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှာ အမြစ်သဖွယ် တွယ်နေပြီး ရှေးဦးလေ့လာရေး စာပေတစ်ခုအနေနဲ့လည်း ထင်ရှားတဲ့ လောကနီတိ၊ စဏကျနီတိ ကျမ်းတွေကို အဓိက ပြုစုရေးသားတင်ပြခဲ့တဲ့ သူကတော့ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ရှေးဟောင်းဒဿန ပညာရှင် စဏကျ Chanakya (Kautilya) 'Visunu Gupta ဖြစ်ပါတယ်။ လောကနီတိမှာ အမျိုးသမီးတွေအပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထားနဲ့ ယောက်ျားကောင်းတို့ရဲ့ သဘောသဘာဝ၊ ပညာရဲ့ သဘောသဘာဝ၊ ပညာရှိတို့ရဲ့ အကျင့်အကြံ၊
Wednesday, June 26, 2013 ထွေရာလေးပါး
Sunday, June 23, 2013 ထူးဆန်းထွေလာ | ဓါတ်ပုံ
Pictures That Prove Society Is Doomed....
Sunday, June 23, 2013 ထွေရာလေးပါး
NERO 6, 7, 8 ,9 ,10 ,11 and 12 SERIALKEY, Patch an...
Jailbreak မပျက်ပဲ iOS ကို Restore လုပ်ကြရအောင် (iO...
ပညာရေး အတွေးအခေါ်: Chanakya စဏကျ၏ ထူးကဲကောင်းမွန်သည...
Zawgyi Font & Keyboard for Mac OS X
Funny & Clever Dog....
ဖုန်းအားသွင်းလို့ ရမည့်ဆိုလာအင်္ကျီအိန္ဒိယက ထုတ်မည်...
ဖုန်းအချင်းချင်း ဖိုင်ပို့သူတွေအတွက် bluetooth ထက်...
Y500-T00 မြန်မာစာ ROOT နဲ့ Firmware ပြန်တင်နည်း
အဆောက်အဦအသွင် ပြောင်းသွားသော သင်္ဘောဟောင်းများ...
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စိတ်ဝင်စားဖွယ် မြို့ပြရှုခင်းများ.....
Euro Sports/Auto World/Premier Eleven/HR Journal မ...
BurnInTest Professional edition V7.1 (32-bit & 64-...
Sport View Journal - Vol2No 24 (20-06-2013)
သတိထားစရာ Hard Drives/USB Stick အတုများ...
ဒက်ခ်ျလူမျိုး Ramon Bruin ရဲ့ အံ့ဖွယ် 3D ပန်းချီလက...
ဓါတ်ပုံဆရာ Wes Naman ရိုက်ကူးထားသော ထူးဆန်း ဓါတ်ပု...
Panasonic ကထုတ်မည့် လက်မ ၂၀ ကျောက်သင်ပုန်း ကွန်ပြူ...
မွန်စာပေ ချစ်သူများအတွက် မွန် Font နဲ့ မွန် Keyboa...
Health Digest Journal (Vol 10/ No 31) (20-06-2013)...
GSM, WCDMA, CDMA 800 Mhz, CDMA 450 Mhz ဖုန်းတွေကို...
အင်တာနက်မှ ငွေပေးချေမှုစနစ် Ypay အား စတင်အသုံးပြုနိ...
Education Digest Journal (Vol2No 21) (20-06-2013...
အသစ်ထွက် Firefox 22 bata 6
Netguide Journal vol(2) Issue (89)...
Windows 8 Underground Edition 2013 64-Bit Build 92...
Windows XP Professional SP3 (x86) Integrated June ...
နိုင်ငံ ၃၀ ကို Gtalk ကနေ အခမဲ့အကန့်အသတ်မရှိ ဆက်သွယ...
အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားအလိုက် အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါမျာ...
Auto Call Recorder Pro v3.51 for android(latest ve...
အံ့ဖွယ် သေရွာပြန် မွေးကင်းစ ကလေးငယ်များ.....
Gmail Notifier Pro 5.0.2 full with keygen (Good wo...
Myanmar Music Store apk 2MB
ACDSee 16 With Keygen Full Version ( 72 MB )
iOS7ကို Update မလုပ်မီ....
တက်တူးချစ်သူများ - ၂
စိတ်ဝင်စားစရာ စက်မှုကမ္ဘာ - ၂
တရုတ်နိုင်ငံ Ferris Wheel ကြီး.....
AVG Anti-Virus Pro 2013 13.0 Build 3345a6382 Final...
၁၅၀၀ တန်ဖုန်းကဒ်ဖြင့် အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံကို ပြည်တွင...
စက်ရုပ်ဖုန်းတွေအတွက် Top Paid Android Apps & Theme...
Graphics Designers တွေအတွက် CorelDraw X5 Portable ...
Antivirus Keys For All Products Update လေးပါ.. (Up...
Adobe Photoshop Lightroom 5.0 Full with Patch/keyg...
စိတ်ဝင်စားစရာ စက်မှုကမ္ဘာ - ၁
Pelican ခေါ် ထူးဆန်းရေငှက်တစ်မျိုး....
Menstruation (4) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၄)...
Samsung Galaxy S2 Secret Codes Tips 2013
ကွန်ပြုတာကနေ ဖုန်းတွေကို SMS ပို့နိူင်မယ့် mightyt...
Router ကို Setting ချပြီး WIFI ပြန်လွှင့်နည်း ( မြန...
100 Gb ဖရီးတင်နိုင်တဲ့ Host ဆိုပါလား..
Central Processing Unit အကြောင်း
တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ပေါ်အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ....
လူသုံးများသော ဆော့ဖ်ဝဲများ၏ Serial Key များ စုစည်း...
အမေရိကန် အနုပညာရှင် Marilyn Sunderland ရဲ့ ဖရုံသီး...
ခဲတံချွန်လို့ ထွက်တဲ့အစာတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ Kyle B...
စစ်အတွင်းက ပဟေဋိဆန်သော ပုံရိပ်များ...
Kids of the Past vs. Kids Today!
KakaoTalk v3.8.1 Apk 7MB
Root Tool တွေထဲမှာ အောင်မြင်နေဆဲ SuperOneClick v2....
MS Office License Keys (97-2013)
Kaspersky Daily Activation Keys (Updated 05 June 2...
Movavi Video Suite 11.3 Full